» नेपाल स्टारका भाईरल भएका १० एपिसोडहरु
नेपाल स्टारका भाईरल भएका १० एपिसोडहरु
९ माघ २०७७, शुक्रबार १६:३७
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ९ माघ । नेपालको आफ्नै गायन रियालिटी शो वाईवाई नेपाल स्टारको पहिलो सिजन यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ । माघ १७ गते फाईनलको तयारी भईरहेको यस शोमा फाईनलका लागि अन्तिम ४ प्रतियोगीहरु पनि छनौट भईसकेका छन् । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस शोका ३७ एपिसोडहरु प्रसारण भईसकेका छन् । यस भिडियो सामग्रीमा वाईवाई नेपाल स्टारका हालसम्म प्रसारित ३७ एपिसोडहरुमध्ये दर्शकहरुले सर्वाधिक हेरेका उत्कृष्ट १० एपिसोडहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । ती एपिसोडहरुमध्ये कुनै कुनै एपिसोडहरु नेपाल टेलिभिजनको अफिसियल युट्युब च्यानलका सर्वाधिक हेरिएका भिडियोहरुमा पनि पर्छन् । तपाईको विचारमा उत्कृष्ट १० एपिसोडभित्र कुन कुन एपिसोडहरु परेका होलान् ? कृपया तपाईको अन्दाज कमेन्टमा लेख्नुहोस् । तपाईको अन्दाज मिल्यो कि मिलेन आउनुहोस् ती १० एपिसोडहरुका बारेमा यो काउनडाउन सुरु गरौँ । हेर्नुहोस् भिडियो–
नम्बर १०–वाईवाई नेपाल स्टारको सर्वाधिक हेरिएको एपिसोडहरुमध्ये दशौँ नम्बरमा शोको आठौँ एपिसोड रहेको छ । यो एपिसोडमा काठमाडौँ अडिसनको पहिलो भागका दृश्यहरु समावेश गरिएको थियो । यो एपिसोडलाई जुन १३ ,२०२० मा युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस एपिसोडलाई ४ लाख ५२ हजार ८ सयभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा ११ हजार लाईक र ८ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
नम्बर ९–वाईवाई नेपाल स्टारको सर्वाधिक हेरिएको एपिसोडहरुमध्ये नवौँ नम्बरमा शोको नवौँ एपिसोड रहेको छ । यो एपिसोडमा काठमाडौँ अडिसनको दोस्रो भागका दृश्यहरु समावेश गरिएको थियो । यो एपिसोडलाई जुन २० ,२०२० मा युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस एपिसोडलाई ४ लाख ७२ हजार २ सयभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा १२ हजार लाईक र ८ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
नम्बर ८–वाईवाई नेपाल स्टारको सर्वाधिक हेरिएको एपिसोडहरुमध्ये आठौँ नम्बरमा शोको चौथो एपिसोड रहेको छ । यो एपिसोडमा धनगढी अडिसनका दृश्यहरु समावेश गरिएको थियो । यो एपिसोडलाई मार्च २८ ,२०२० मा युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस एपिसोडलाई ४ लाख ९१ हजार ८ सयभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा १३ हजार लाईक र १ हजार ३ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
नम्बर ७–वाईवाई नेपाल स्टारको सर्वाधिक हेरिएको एपिसोडहरुमध्ये सातौँ नम्बरमा शोको सातौँ एपिसोड रहेको छ । यो एपिसोडमा बर्दिबास अडिसनका दृश्यहरु समावेश गरिएको थियो । यो एपिसोड नेपाल टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा अपलोड भएका सबै भिडियोहरुमध्येमा पनि सबैभन्दा बढी हेरिएका भिडियोहरुमध्येका दशौँ नम्बरमा पर्छ । यो एपिसोडलाई अप्रिल १८ ,२०२० मा युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस एपिसोडलाई ४ लाख ९७ हजार ७ सयभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा ११ हजार लाईक र १ हजार ५ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
नम्बर ६–वाईवाई नेपाल स्टारको सर्वाधिक हेरिएको एपिसोडहरुमध्ये छैटौँ नम्बरमा शोको उनान्तिसौँ एपिसोड रहेको छ । यो एपिसोडमा उत्कृष्ट १४ प्रतियोगीहरुको प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो । यो एपिसोड नेपाल टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा अपलोड भएका सबै भिडियोहरुमध्येमा पनि सबैभन्दा बढी हेरिएका भिडियोहरुमध्येको नवौँ नम्बरमा पर्छ । यो एपिसोडलाई नोभेम्बर २१ ,२०२० मा युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । यस एपिसोडमा विशेष अतिथिका रुपमा हाँस्य कलाकार सन्दिप क्षेत्री उपस्थित भएका थिए । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस एपिसोडलाई ५ लाख २५ हजार ३ सयभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा १६ हजार लाईक र १ हजार २ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
नम्बर ५–वाईवाई नेपाल स्टारको सर्वाधिक हेरिएको एपिसोडहरुमध्ये पाँचौँ नम्बरमा शोको पाँचौँ एपिसोड रहेको छ । यो एपिसोडमा सुर्खेत अडिसनको दृश्यहरु समावेश गरिएको थियो । यो एपिसोड नेपाल टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा अपलोड भएका सबै भिडियोहरुमध्येमा पनि सबैभन्दा बढी हेरिएका भिडियोहरुमध्येको आठौँ नम्बरमा पर्छ । यो एपिसोडलाई अप्रिल ४,२०२० मा युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस एपिसोडलाई ५ लाख २७ हजार ८ सयभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा १३ हजार लाईक र १ हजार ३ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
नम्बर ४–वाईवाई नेपाल स्टारको सर्वाधिक हेरिएको एपिसोडहरुमध्ये चौथो नम्बरमा शोको छैटौँ एपिसोड रहेको छ । यो एपिसोडमा ईटहरी अडिसनको दृश्यहरु समावेश गरिएको थियो । यो एपिसोड नेपाल टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा अपलोड भएका सबै भिडियोहरुमध्येमा पनि सबैभन्दा बढी हेरिएका भिडियोहरुमध्येको छैटौँ नम्बरमा पर्छ । यो एपिसोडलाई अप्रिल ११,२०२० मा युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस एपिसोडलाई ५ लाख ६० हजार १ सयभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा १३ हजार लाईक र १ हजार २ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
नम्बर ३–वाईवाई नेपाल स्टारको सर्वाधिक हेरिएको एपिसोडहरुमध्ये तेस्रो नम्बरमा शोको तेस्रो एपिसोड नै रहेको छ । यो एपिसोडमा चितवन अडिसनको दृश्यहरु समावेश गरिएको थियो । यो एपिसोड नेपाल टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा अपलोड भएका सबै भिडियोहरुमध्येमा पनि सबैभन्दा बढी हेरिएका भिडियोहरुमध्येको चौथो नम्बरमा पर्छ । यो एपिसोडलाई मार्च २१,२०२० मा युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस एपिसोडलाई ६ लाख ५७ हजार ४ सयभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा १५ हजार लाईक र १ हजार ३ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
नम्बर २–वाईवाई नेपाल स्टारको सर्वाधिक हेरिएको एपिसोडहरुमध्ये दोस्रो नम्बरमा शोको दोस्रो एपिसोड नै रहेको छ । यो एपिसोडमा बुटवल अडिसनको दृश्यहरु समावेश गरिएको थियो । यो एपिसोड नेपाल टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा अपलोड भएका सबै भिडियोहरुमध्येमा पनि सबैभन्दा बढी हेरिएका भिडियोहरुमध्येको तेस्रो नम्बरमा पर्छ । यो एपिसोडलाई मार्च १४,२०२० मा युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस एपिसोडलाई ८ लाख ९ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा २० हजार लाईक र १ हजार ७ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
नम्बर १–वाईवाई नेपाल स्टारको सर्वाधिक हेरिएको एपिसोडहरुमध्ये पहिलो नम्बरमा शोको पहिलो एपिसोड नै रहेको छ । पहिलो एपिसोडमा पोखरा अडिसनका दृश्यहरु समावेश गरिएको थियो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यो एपिसोड नेपाल स्टारको सर्वाधिक हेरिएको एपिसोडमात्र नभई नेपाल टेलिलिभजको युट्युब च्यानलमा सर्वाधिक हेरिएका भिडियोहरुमध्येको पनि पहिलो नम्बरमा परेको छ । यो एपिसोडलाई मार्च ७, २०२० मा युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस एपिसोडलाई १२ लाख ५४ हजार ६ सयभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा ३९ हजार लाईक र ३ हजार २ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् । आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई यी १० एपिसोडहरुमध्ये कुन कुन एपिसोडहरु रोचक लागेको थियो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।